Portal:Baayooloji - Wikipedia
Portal Baayooloji ama Bayoloji
Biologia علم الأحياء Biology
Gadaal | Horay
Baayooloji waa cilmiga barashada noolaha, baayooloji waxa uu ka yimid kalmada giriiga ah ee macnaheegu yahay "bios" nolol iyo "logos" hadal ama barasho. Cilmiga bayoolojigu waxa uu ka mid yahay cilmiyada ugu balaadhan ee la barto. Bayoolojiga waxa loo qaybin karaa laba dhir iyo xayawaan iyada oo loo eegayo habka cunto samaysiga ee uu leeyahay nooluhu ama waxa loo qaybin karaa hal unugle iyo unugyo badane iyada oo loo eegayo tirada unugyada ee uu leeyahay. unug waa halbeega shaqo iyo dhisme ee ugu yar ee uu leeyahay noole. unugyada ay leeyihiin noolayaashu waxay u qaybsamaan laba kuwa dhamaystiran iyo kuwa dhiman oo aan dhamays tirnayn. sidoo kale cilmiga bayloojigu waxa uu ku shaqo leeyahay barashada meesha uu ku noolyahay noole.
Ensiim Insiim waa Biomolikule oo xowli ama boobsiis ku sameeyo waxyaabaha kimikaalka dibusocodka leh. Ensiim badankooddu waxay ka sameesanyihiin protein.Shaqooyinka ugu badan ee ka dhaca Unuga, waxa ugu badan ee ay isticmaalaan waa Ensiim, si ee shaqada u dhakhsato. Micnaha Ensiimka waxa uu yahay in uu wax boobsiiyo ama xowli ku daro waxyaabaha qaarkood oo dibusocodka leh, wuxuuna u shaqeeyaa sida katalaysyaasha kale, wuxuu soo ridaa energiga hooseeya (Ea ama ΔG‡), si uu uga dhashto dibusocod, taasna waxaa ka soo baxo, dibbu socod aad u xoogan, oo malyan jeer ka xoogan, xowliga kuwa aan katalaysyaasha ahayn. Dibusocodka noocan ah looma isticmaalo Ensiim, waxay badiyaan ama saa'iidiyaan kuwa kale ee dib u socodka leh ee ay isku midka yihiin. Ensiimka waxa oo uga go'an yahay katalasyaasha waxaa ka mid ah: si sax ah ayuu wax u keenaa, waxaana lagu yaqaanaa in uu badiyo ama ka dhigo Kombondiga Orgaaniga ah ilaa 4000 oo dib u socod ah. Nin la dhihi jiray (Eduard Buchner) oo Jarmal ahaa, wuxuu Ensiimka mar ka soo saaray wax la idhaa (DNA polymerase), waana meesha laga soo alifay DNA'ga.
Kaydka... Aqri dheeraad...
Ibn al-Nafiis waa (أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحرم القَرشي الدمشقي) waxa uu ahaa dhakhtar carbeed waxa uu dhashay sanadii 1210 waxa uu ku dhashay magaalada dimishiq waana mid kamida culimada culuumta ee caalamka soo martay gaar ahaan baadhistii wareega dhiiga waana kii ugu horeeyay ee ogaaday wareega dhiiga 1288
Ubaxa iyo dhirta
Portal:Baayooloji/Dhir iyo Ubax
Ma Ogtahay ?
Swir xul ah
Portal:Baayooloji/Sawir xul ah
Ku saabsan Baayooloji
Portal Bah wadaah
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Baayooloji&oldid=141261"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 May 2015, marka ee eheed 18:25.